ကောင်းလိုက်တာ ရွှေဝင်းရယ် - Dr Mg Nyo [အပြာစာပေ]
ရွှေဝင်းတစ်ယောက် ရွာအရှေ့ပိုင်းက ဦးထွန်းမောင် အိမ်သို့ ညတိုင်းရောက်လေ့ရှိ၏။ ဦးထွန်းမောင်မှာ တစ်ရွာလုံးက အားကိုးအားထားပြုရသည့် ဓာတ်ဆရာကြီး ဖြစ်သည်။ ဗိန္ဓော၊ ဗေဒင်၊ ပယောဂကု၊ ဓာတ်ရိုက်ဓာတ်ဆင်၊ အခါပေး အစရှိသော လောကီရေးရာ ကိစ္စမှန်သမျှ ဦးထွန်းမောင်ကို ယုံကြည်အားထားကြသည်။
ရွှေဝင်းမှာ အသက် ၁၅ နှစ်ကျော် လူပျိုပေါက်ကလေးဖြစ်၏။ ကျေးလက် သဘာဝအတိုင်း နေ့ပိုင်းတွင် မိဘများနှင့် တောင်သူအလုပ်လုပ်ကိုင်ပြီး ညပိုင်းတွင် ဦးထွန်းမောင်ထံမှာ လောကီဗဟုသုတများကို ကြားနာမှတ်သား ဆည်းပူး၏။ ဦးထွန်းမောင်မှာ ဤရွာဇာတိသား မဟုတ်ပါ။ မြေလတ်ဇာတိသား ဖြစ်၏။ အပျိုကြီး မတင်သောင်းကို ဆေးကုပေးရင်း အကြင်လင်မယား ဖြစ်သွားကြ၏။
မတင်သောင်းက ရွှေဝင်းအမေ မစောကြည်နှင့် ညီမတဝမ်းကွဲတော်သည်။ ထို့ကြောင့် ရွှေဝင်းမှာ ဦးထွန်းမောင်မိန်းမ မတင်သောင်း၏ တူတဝမ်းကွဲ ဖြစ်သည်။ ယခုဆိုလျှင် ရွှေဝင်းတစ်ယောက် ဗေဒင်အနှစ်ချုပ်ဖြစ်သော မဟာဘုတ် တွက်နည်းများကို အဟောနှင့်တကွ တတ်မြောက်သွားခဲ့ချေပီ။ သံဒိဋ္ဌပြက္ခဒိန်ကို ကြည့်၍ ဇာတာအကြမ်းဖွဲ့နည်း ဘာဝ ၁၂ ပါး ယူဆဟောပြောနည်းတို့ကို ဆက်လက် ဆည်းပူးနေပါသည်။
ဦးထွန်းမောင်နှင့် ပက်သက်ခဲ့သည်မှာ ၅ နှစ်ကျော်ပြီဖြစ်၍ အတော်လေး ရင်းနှီးလာသည်။ ဦးထွန်းမောင်နှင့် မတင်သောင်းတို့ အိမ်ထောင်သက်မှာလည်း ၁၀ နှစ်ကျော်လာပြီ။ သူတို့နှစ်ယောက်မှာ သားသမီးမထွန်းကားသည့်အတွက် ရွှေဝင်းမှာ မွေးစားသားလိုဖြစ်နေပါတော့သည်။ ယခုရက်ပိုင်းတွင် ပထနီဘာဝနှင့် ပက်သက်၍ အဟော(ဖလိတ) ပညာရပ်များကို သင်ကြားရင်း ဖိုမဆက်ဆံခြင်းကိစ္စများ၊ မိန်းမတို့၏ သဘောသဘာဝများကို ထိုထိုဇာတ်ကောင်တို့မှ ထုတ်နှုတ်၍ ဗဟုသုတဖြစ်အောင် ပြောပြလေ့ရှိသည်။
“ဒီနေ့ည…. ဒီမှာအိပ်တော့…. နေ့လည်က သင်ထားတာတွေ ပိုမှတ်မိအောင် ည အလွတ်ဆွေးနွေးကြမယ်…ကြားလာ”
ရွှေဝင်းတစ်ယောက် ဝိုင်းကူလုပ်စရာရှိသည်များ လုပ်ပေးပြီးနောက် အိပ်ပြန်မည်အပြု ဦးထွန်းမောင်က ဒီမှာဘဲ အိပ်ဖို့ပြောလာ၏။
ညစာ ထမင်းစားပြီးသောအခါ အိမ်မျက်နှာစာရှိ ၉ ပေ ပတ်လည် ကွပ်ပြစ်ကြီးပေါ်တွင် ပက်လက်အိပ်နေသော ဦးထွန်းမောင်ကို နှိပ်ပေးရင်း ဆွေးနွေးပွဲ စတင်ပါတော့သည်။ မတင်သောင်းမှာ အိမ်အောက်ထပ်တွင် ပြောင်းဖူးဖတ် ဆေးလိပ်လိပ်ရင်း ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။
“မောင်ရွှေဝင်းရေ…. ခြေမျက်စိကြောကို နာနာနှိပ်စမ်းကွာ”
ထို့နောက် ပညာရပ်နှင့် ပက်သက်သော ဆွေးနွေးခန်းကို စတင်ပါတော့သည်။
“….ဘာဝ ၁၂ ပါးကို ရွတ်ပြစမ်း”
“တနု၊ ကတုမ္ဗ၊ သဟဇ၊ ဗန္ဓု၊ ပုတြ၊ ဘာရီ၊ ပထနီ၊မရဏ၊ သုဘ၊ ကမ္မ၊ လာဘ၊ ဗျယ…. ပါ…အဘ”
“အေး ဟုတ်ပြီ အဲဒီ ၁၂ ပါးထဲမှာ ဓနုရာသီမှာ လဂ်ရှိတယ်ဆိုပါတော့…. အဲဒီ ဇာတာခွင်ရဲ့ပထနီဘာဝ ဟာ ဘယ်ရာသီဖြစ်မလဲ…”
ရွှေဝင်း တစ်ယောက် မျက်စိစုံမှိတ်ရင်း စဉ်းစားသည်။ စက္ကန့် ၃၀ လောက်အကြာတွင်
ဦးထွန်းမောင်က ချီးမွမ်းလိုက်သဖြင့် ရွှေဝင်းသဘောကျသွား၏။ ဦးထွန်းမောင်က စကားပြန်ဆက်သည်။
“……အဲဒီ လဂ်ရှိတဲ့ ဓနုရာသီ တနင်္လာဂြိုတ် ထည့်လိုက် တနင်္လာဂြိုတ်ဆိုတော့ ဘာဂဏန်းထည့်မှာလဲ….”
“၂ ဂဏန်းပါ အဘ”
“ဟုတ်ပြီ… တစ်ခါ….. မေထုန်ရာသီမှာရှိတဲ့ ပထနီဘာဝထဲကို…. သောကြာဂြိုတ် ထည့်လိုက်”
“…..အဲဒါကို အကြမ်းဖျင်း စန်း/လဂ်/သောကြာ အပူးလို့မှတ်ထား”
“…..အဲဒီလို ပထနီဘာဝမှာ သောကြာဂြိုလ်ရှိတဲ့ မိန်းမဇာတာဆိုရင် အဲဒီမိန်းမဟာ လျှပ်ပေါ်လော်လီတယ်။ ကာမဂုဏ်အာရုံ များပြားတယ်။ ရည်းစားများတယ်။ ပွဲလမ်းသဘင် အပျော်အပါးများတယ်။ ကာမရာဂအား ကြီးတယ်။ ရမ္မက်သွေးသား သောင်းကြမ်းတယ်။ စိတ်အမြဲရွှင်လန်းတယ်။ ဒီဇာတာရှင် မိန်းမမျိုးကို ကာမဂုဏ်နဲ့နူးရင် ပါလွယ်တယ်။ ကြွတယ်၊ ထတယ်၊ ရွတယ်။ ခုခေတ်စကားနဲ့ ပြောရင် ပွမ်တယ်။ ခဏ ခဏ ကာမဂုဏ် ခံစားချင်တယ်။ ကာမဂုဏ် ခံစားချင်တယ်ဆိုတာ ရှင်းရှင်းပြောရရင် အမြဲတမ်း အလိုးခံချင်တယ်လို့ ပြောတာပေါ့ကွာ….ဟား…ဟား….”
ဦးထွန်းမောင်က တဟားဟား ရယ်ပါတော့သည်။ ရွှေဝင်းကလည်း အလွန်အဖိုးတန်သော သင်ခန်းစာမို့ အမိအရ မှတ်ထား၏။
“ဒီလို မိန်းမမျိုးကို မဃဒေဝ လင်္ကာက ပက်ပက်စက်စက် ရေးထားသကွ။ အသေအချာ မှတ်ထား…. ငါ (၃) ခေါက်လောက် ဖြေးဖြေးချင်း ဆိုပြမယ်။ ……မိစ္ဆာလိုကြူး၊ လင်ကုန်ကူးသည်၊ ညစ်ညူးစာရီ၊ အလဇ္ဇီဖြင့်၊ ဒုဿီဣတ္ထိ၊ မျိုးဇာတိတို့။ မိမိကိုယ်ကို၊ စိတ်အလိုတိုင်း၊ ထိုထိုယောကျာ်း၊ တပ်ရာများနှင့်၊ လိုက်စားနှံလိုက်မည့်သာကို…… တဲ့…”
ဦးထွန်းမောင်က မဃဒေဝလင်္ကာကို ဖြေးဖြေးချင်း သုံးခေါက်တိတိ ရွတ်ပြသည်။ ရွှေဝင်းကလည်း စိတ်ထဲစွဲအောင် မှတ်သားထားသည်။ ရွှေဝင်းက မှတ်ညဏ်ကောင်း၏။ ထို့ကြောင့်……. ဦးထွန်းမောင် အောက်ပါ… လင်္ကာစာပိုဒ်ကို (၃) ခေါက်တိတိ ဖြည်းဖြည်းချင်း ဆိုပြပြန်သည်။
“ကိလေသာဟူ၊ မိုကသွေးဆူက၊ လူသောခွေးသော၊ ကျေးကျွန်သောပု၊ သဘောမထင်၊ မဆင်ခြင်ဘဲ၊ အမြင်မဖြောင့်၊ မျိုးမစောင့်ဘူး…. တဲ့ ”
(၃) ခေါက်လောက် ချပေးပြီးသောအခါ ဦးထွန်းမောင်က ရွှေဝင်းကို ဆိုခိုင်း၏။ ရွှေဝင်းကလည်း မထစ်မငေါ့….. ဆိုပြလိုက်သည်။
“အေး အသေအချာ ပြန်မှတ်ထားနော်။ စောစောက ပြောခဲ့တဲ့ ဇာတာရှင် မိန်းမမျိုးကိုတွေ့ရင် အိမ်ထောင်ရေး ဖောက်ပြန်မည့် မိန်းမ။ တဏှာရာရအားကြီးမည့် မိန်းမ။ ယောကျာ်းအမျိုးမျိုးနဲ့ဖြစ်ပြီး လင်ကုန်ကူးမည့် မိန်းမ။ ရာဂရမ္မက်တွေ ဆူပွက်လာပြီဆိုရင်….. လူသော… ခွေးသော…. အစေခံသော ထည့်မတွက်တော့ဘဲ… ကာမဂုဏ် ဆက်ဆံတော့မည့် မိန်းမလို့ မှတ်ထားပေတော့ မောင်ရွှေဝင်းရေ”
“ဒီကာမနဲ့ ပက်သက်ရင်….. အလောင်းတော်ပါရမီရှင်ကြီးများတောင် ကာမချောက်ထဲ ကျပြီး ဈာန်တံခိုးတွေ ကွယ်ပျောက်ခဲ့ရဖူးတယ်”
“အလောင်းတော် ပါရမီရှင်ကြီးဟာ ဘဝတစ်ခုမှာ ဟရိတစ အမည်ရှိတဲ့ ဈာန်အဘိညာဉ်ရ ရသေ့သူတော်စင် ဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်။ မိုးတွင်းကာလမို့ ဟိမဝန္တာကနေ ဗာရာဏသီမင်းရဲ့ ဥယျာဉ်ထဲမှာ သီတင်းသုံးနေတော်မူတယ်။ ဘုရင်ကလည်း ရသေ့ကိုမြင်တော့…. အရမ်းကြည်ညိုသွားတယ်။ ဒါနဲ့ နေ့တိုင်း နန်းတော်ကိုကြွပြီး ဆွမ်းဘုန်းပေးဖို့ လျှောက် ထားတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ရသေ့ဟာ နေ့တိုင်းကောင်းကင်ခရီးကကြွလာပြီး ဆွမ်းဘုန်းပေးတယ်”
“အဲ တနေ့တော့…တိုင်းစွန်ပြည်ဖျားမှာ သူပုန်ထရောဆိုပါတော့ကွာ။ သူပုန်ဘေးရန်ကို ဘုရင်ကိုယ်တိုင် နှိမ်နှင်းမှာဆိုတော့ ဘုရင်က သူ့မိဖုရားကြီးကို ဆရာ ရှင်ရသေ့ကို ပစ်မထားဖို့ တာဝန်ကျေအောင် ပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့ အထပ်ထပ်အခါခါ မှာခဲ့တယ်။ နောက်တနေ့….. အလောင်းတော် ရသေ့ဟာ ကောင်းကင်ခရီးက ဈာန်ယာဉ်စီးပြီး ဆွမ်းဘုန်းပေးဖို့ ကြွလာပါရော။ မိဖုရားကြီးကလည်း ဆွမ်းပွဲပြင်ပြီး သလွန်ပေါ်မှာ လဲလျှောင်းရင်းစောင့်နေတယ်။ ပြီးတော့ မှေးကနဲအိပ်ပျော်သွားတယ်။ ရသေ့ရဲ့ ကိုယ်ရုံအဝတ်အသံကြောင့် ဖျတ်ကနဲနိုးလာပြီး ဗြုန်းကနဲ ထထိုင်လိုက်တယ်။ အဲဒီအခိုက်မှာ မိဖုရားကြီးရဲ့ အောက်ပိုင်းကိုယ်ဝတ်ဟာ စောစောကထဲက ရော့တိရော့ရဲ ဖြစ်နေတော့ပေါင်လည်လောက်ထိ လျှောကျသွားပါရော။ ဟိမဝန္တာ တောကြီးထဲမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ သမထတရားနဲ့ မွေ့လျှော်ခဲ့တဲ့ ရသေ့မြတ်ဟာ ဖြူဖွေးဝင်းမွတ်နေတဲ့ ပေါင်တံအလှနဲ့ ပေါင်ကြားက ကာမရတနာ ဖေါင်းဖေါင်းကြီးကို ဗြုန်းကနဲ မြင်လိုက်ရပါရော..။ ဘာပြောကောင်းမလဲကွာ တစ်ခါထဲ ကာမဘီလူးဝင်ပူးပြီး မိဖုရားကြီးနဲ့ မေထုန် သံဝါသ ပြုကြပါလေရော”
“ဟို မေထုန်သံဝါသ ဆိုတာ ဘာလဲ အဘ…”
“အေးအေး ဟုတ်တယ်….ဒါက ပါဠိစကားဆိုတော့ မင်း ဘယ်သိမလဲ။ မေထုန် သံဝါသဆိုတာ ကာမ စပ်ယှက်တာ…. ခပ်ရိုင်းရိုင်း ပြောရရင် လိုးတာပေါ့ကွာ။ ဟား ဟား”
“ကဲ ကဲ လိုရင်းကိုပြောမယ်…။ ဈာန်ရ ရသေ့တောင် မိန်းမရဲ့ အတွင်းပစ္စည်းကို မြင်ရတော့ စိတ်မထိန်းနိုင်ဘဲ လွန်ကျူးဆက်ဆံမိတော့တာပေါ့ကွာ…..။
“ဟင် ဒါတော့ လွန်တာပေါ့ အဘရာ။ ဈာန်အဘိညာဉ်ရ ရသေ့လဲဆိုသေး။ ဒီလောက်ကြီးထိ အရှက်မဲ့စွာ ပြုရသေးလားဗျ”
“….အေး…ဟုတ်ပါရဲ့….ကာမတဏှာလေကွာ….။ မျက်စိနဲ့ မိဖုရားကြီးရဲ့ အောက်ပိုင်းပစ္စည်းပေါင်းစုံမိတော့ ကိလေသာ တဏှာရာဂ မီးတောက်လောင်တော့တာပေါ့။ အဲဒီအခိုက်မှာ မောဟအမှောင်ကလည်း ဖုံးလွှမ်းသွားပြန်တော့ ဟိရီသြတ္တပ္ပလို့ခေါ်တဲ့ အရှက်အကြောက် ညဏ်မျက်စိလည်း ကန်းသွားတော့တာပေါ့။ ပြီးတော့ ရှင်ရသေ့ရထားတဲ့ တရားကလည်း လောကီဆိုင်ရာ သမထတရားဆိုတော့ ကာမတဏှာကိလေသာဓာတ်ကို မတွန်းလှန်နိုင်သေးဘူးလေ။ အဲဒီနေ့ကစပြီး ရှင်ရသေ့ဟာ….. ဈာန်တရားတွေ ကွယ်ပျောက်ပြီး မြေပြင်ကနေ ခြေလျှင် ခရီးနဲ့ ကြွကြွလာပြီး မိဖုရားကြီးနဲ့ မေထုန်သံဝါသပြုတော့တာပါဘဲ။ အရှက် အကြောက်ဆိုတာလည်း ကွယ်ပျောက်သွားပြီလေ။ နောက်ဆုံးဘုရင်ကြီး ပြန်ကြွလာတော့မှဘဲ ဒီကာမ ဇာတ်လမ်းဟာ တစ်ခန်းရပ်သွားတော့တယ်။ ဒီတော့ ကာမဟာ ဘယ်လောက် အစွမ်းထက်တဲ့အရာလဲဆိုတာ…. မင်းသဘောပေါက်ရောပေါ့”
ဦးထွန်းမောင်တစ်ယောက် စကားပြောရတာ တော်တော် မောသွားသဖြင့် သူ့မိန်းမ မတင်သောင်း စပါယ်ရှယ် လိပ်ပေးထားသော ပြောင်းဖူးဖက်ဆေးလိပ်ကို မီးညှိ၍ ဖွာရှိုက် လိုက်ပါတော့သည်။
“……ထားပါတော့ အဘရာ…..အစပထမမှာ ရသေ့က မှားတယ်ဆိုပါတော့။ နေ့စဉ် ရက်ဆက်ကျတော့ မိဖုရားကြီးကိုယ်နှိုက်ကပါ အလိုတူလို့ပေါ့နော် အဘ”
“…ဟား… ဟုတ်တာပေါ့…မောင်ရွှေဝင်းရေ….။ စောစောက အဘသင်ပေးထားတဲ့ မဃဒေဝ ဒုတိယအပိုဒ်လေး ရွတ်ပြစမ်း…”
ရွှေဝင်းက မထစ်မငေါ့ ရွတ်ပြသည်။
“ကိလေသာဟူ၊ မိုက်သွေးဆူက၊ လူသော ခွေးသော၊ ကျေးကျွန်သောဟု၊ သဘောမထင်၊ မဆင်ခြင်ဘဲ၊ အမြင်မဖြောင့်၊မျိုးမစောင့်ဘူး…”
တစ်နာရီလောက် အကြာတွင် အောက်ထပ်က တကျွိကျွိ လှုပ်ရှားသံတွေကြောင့် ရွှေဝင်းဖျတ်ကနဲ နိုးလာသည်။ ရွှေဝင်းက….. အိပ်ပျော်လွယ်သလောက် အလွန်အအိပ်စက်သူ ဖြစ်၏။ အောက်ထပ်အခန်းနှင့် အပေါ်ထပ်ရှိ သူ့အခန်းမှာ တဆက်တည်း ဖြစ်နေ၍ လှုပ်ရှားသံတွေကလည်း တဆက်တည်းလို ဖြစ်နေသည်။ ရွှေဝင်းအသံမကြားရအောင် ကုတင်ပေါ်က အသာအယာ ဆင်းလိုက်သည်။
သူ့အခန်းမှာ မီးမှောင်နေသဖြင့် အောက်ထပ်အခန်းထဲရှိ မီးရောင်က လက်တစ်လုံးခန့် ပေါက်နေသော ကြမ်းပြင်ကို အရောင်ဟပ်နေသည်။ ထိုအပေါက်မှ အောက်ထပ်အခန်းဆီသို့ အသာလေး ချောင်းကြည့်လိုက်သည်။ ဦးထွန်းမောင်နှင့် သူ့အဒေါ် မတင်သောင်းတို့ အဝတ်အစားကင်းကွာ ဗလာကိုယ်တုံးလုံးကြီးဖြင့် လိုးနေကြသည်ကို မီးရောင်အောက်တွင် အထင်းသားကြီး မြင်တွေ့ရသည်။အပေါ်ထပ်နှင့် အောက်ထပ်အကွာအဝေးမှာ (၇)ပေလောက် ကျော်ကျော်မျှသာရှိသဖြင့် မြင်ရသော မြင်ကွင်းမှာ ဝေးလှသည်မဟုတ်။ ထို့အပြင်…. ဘတ္ထရီဖန်ချောင်း မီးဖြစ်သဖြင့် အလင်းရောင်က လင်းထိန်နေသည်။
မတင်သောင်း လက်နှစ်ဖက်က ဘေးသို့ဆန့်ချထားပြီး မျက်လုံးစုံမှိတ်ကာ ခံနေသည်။ အသက်အရွယ်ကြောင့်လားမသိ ဦးထွန်းမောင် လိုးနေပုံက အားမာန်သိပ်မပါလှ။ မကြာခင်မှာပင် ဦးထွန်းမောင် ဆတ်ကနဲ ဆတ်ကနဲ တုန်လှုပ်ကာ ဖင်ကြောကြီးတွေ ရှုံ့ရှုံ့ခွက်သွားပြီး ဆောင့်နေသော အရှိန်များလည်း ရပ်တန့်သွားသည်။ မတင်သောင်းကမူ ဒူးထောင်ပေါင်ကား ပက်လက်အနေအထားဖြင့် စောစောက အတိုင်းပင် ငြိမ်သက်နေသည်…။
ရွှေဝင်းတစ်ယောက် အပေါ်ထပ်ချောင်းကြည့်ရင်း လီးတွေ တောင်နေသည်။ အမှန်အားဖြင့် သူ့အဒေါ်ဝမ်းကွဲတော်စပ်သော မတင်သောင်းမှာ သွေးသား ဆူဖြိုး ကာမအားတွေ တိုးကောင်းနေဆဲ အရွယ်ဖြစ်သည်။ အခုမှ အသက် (၃၈) နှစ်မျှသာ ရှိသေးသည်ဖြစ်ရာ ထန်လို့သန်လို့ အကောင်းဆုံး အရွယ်ဖြစ်၏။ ထိုသို့ဖြစ်ပါလျှက်…….. မတင်သောင်း တုန့်ပြန်ချက်တွေက အပေးအယူ မမျှဘဲ အေးစက်စက် အနေအထားဖြစ်နေသည်။
ဦးထွန်းမောင်တစ်ယောက် မတင်သောင်းကိုယ်လုံးပေါ်တွင် မှောက်ထပ် ထားရာမှ ကုန်းထလိုက်ပြီး မတင်သောင်းဘေးတွင် ယှဉ်အိပ်လိုက်သည်။ ပေါင်ကြားရှိ လီးတန်ကြီးအရှည်မှာ ငါးလက်မခန့်သာရှိပြီး ပျော့ခွေနေသည်။ တောင်လျှင် အဘယ်မျှရှည်သည် မသိ။ ယခုပျော့ခွေနေသော အနေအထားမှာ ငါးလက်မခန့်သာရှိရာ ရွှေဝင်းလီးထက်ပင် သေးနေပါသေးသည်။
ရွှေဝင်းလီးတန်မှာ အရှည် (၇) လက်မ..။ အတုတ်က (၆) လက်မခန့် ရှိသည်။ လီးချင်းယှဉ်ရိုက်လျှင် ရွှေဝင်းလီးက အပြတ်အသတ်နိုင်မှာ သေချာ၏။ ပေါင်တံ ဖွေးဖွေးတုတ်တုတ်ကြီးတွေက ရွှေဝင်းစိတ်ကို လှိုင်းထလှုပ်ရှားစေသည်။ မတင်သောင်း၏ ဝတ်လစ်စလစ် ကိုယ်လုံးကြီးကိုကြည့်ရင်း ရွှေဝင်းပေါင်ကြားက လီးတန်ကြီးမှာ တဆတ်ဆတ် တောင်မတ်လာ၏။ တဖြည်းဖြည်း မာကျောတင်းတောင် လာသည်။
ရွှေဝင်းက သူ့လီးတန်ကြီးကို ခပ်တင်းတင်း ဆုပ်ကိုင်ရင်း ဆက်ကြည့်နေ၏။ သူ့အဒေါ်၏ ကိုယ်ခန္ဓာအလှမှာ အစွမ်းကုန် ပေါ်လွင်နေပါတော့သည်။ နို့ကြီးနှစ်လုံးက တင်းရင်းမို့မောက်ကာ နို့သီးခေါင်းတစ်ဝိုက်မှာ စူဖောင်းနေ၏။ ခါးက အနည်းငယ် တုတ်သယောင် ရှိပြီး….. ဖင်ဆုံကြီးက ပြည့်ဖြိုး ထွားကားလှသည်။ ဆီးခုံကြီးက စင်းမို့နေပြီး စောက်မွှေးတွေက မဲချိတ်နက်မှောင်နေသည်။ စောက်ဖုတ်ကြီးက သိသိသာသာကို ခုံးကြွနေသည်။စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားကြီး နှစ်လွှာက အညိုရောင်သမ်းနေပြီး အနည်းငယ် ပြဲဟနေသည်။
မတင်သောင်းက ဘယ်ဖက်လက်ဝါးဖြင့် သူ့စောက်ဖုတ်ကြီးကို ခပ်ဖွဖွလေး ပွတ်ပေးရင်း ညာလက်ဖဝါးကမု ဦးထွန်းမောင်၏ ပျော့ခွေနေသော လီးတန်ကြီးကို ဆွပေးနေသည်။ ဆုတ်လိုက် ဖြဲလိုက်၊ ဂွင်းတိုက်လိုက်၊ လှုပ်ရမ်းလိုက်ဖြင့် အမျိုးမျိုး ဆွပေးနေသည်။ သို့သော်…. လီးတန်ကြီးက ပျော့ခွေမြဲ ပျော့ခွေနေသည်။ ယခင်က အလွန်အလိုးသန်လှသော ဦးထွန်းမောင်တစ်ယောက် တစ်ချီမျှ လိုးပြီးရုံနှင့် ယခုလို ပျော့ခွေသွား တတ်သည်မှာ မှတ်မှတ်ရရ (၃) လကျော်ပြီ။
မတင်သောင်းတစ်ယောက် ကာမဆန္ဒ ပြည့်ဝခါနီးပြီဆိုလျှင် သူ့ယောကျ်ား ဦးထွန်းမောင်မှာ သုတ်ရေတွေ ပန်းထွက်ပြီး အရှိန်ကုန်သွားတတ်၏။ စောစောပိုင်းကမူ လီးကြီးက ဆွလိုက်လျှင် ပြန်ထလာတတ်သည်။ ယခုနောက်ပိုင်း မထတော့။ သို့သော် ထလိုထညားဟူသော မျှော်လင့်ချက်ဖြင့် မတင်သောင်းကတော့ ဆွဲပေးမြဲ ဆွပေး၏။ ကြာတော့ မတင်သောင်း စိတ်ဓာတ်ကျလာသည်။ ဆွပေးချင်စိတ်တွေ ကုန်ခမ်းလာသည်။ ကိုယ့်စောက်ဖုတ်ကိုဆွပြီး ကိုယ့်လက်နှင့်ပင် ပြီးလိုက်တော့မည်ဟု စိတ်ပိုင်းဖြတ်ကာ ဆက်ဆွမပေးတော့….။
တဖြည်းဖြည်း ကာမစိတ်တွေ ထကြွလာသည်။ ကာမဇောတွေ ပြင်းထန်လာသည်။ စောက်ဖုတ်ထဲကို လက်ခလယ်ထိုး၍ ခပ်သွက်သွက်ကလေး အသွင်းအနှုတ်လုပ်သည်။ ပေါင်နှစ်ချောင်းကို ပင့်ထောင်လိုက်ပြီး စိတ်ရှိလက်ရှိ ဆွနေ၏။
ဦးထွန်းမောင်ကမူ…. တစ်ဖက်သို့ စောင်းအိပ်ရင်း တခေါခေါနှင့် ဟောက်နေပါတော့၏။ သွေးသားဆူဖြိုးသော မတင်သောင်းမှာ အသက် (၃၈) နှစ်မျှသာ ရှိသေးရာ ထန်လို့ ထလို့ ကြွလို့ ရွလို့ အကောင်းဆုံး အရွယ်ဖြစ်သည်။ အဒေါ်ဖြစ်သူ၏ ရမ္မက်ဇော ထန်ကြွနေသော ပုံစံကြီးကိုကြည့်၍ ရွှေဝင်းတစ်ယောက်လည်း ရမ္မက်သွေး ဆူဝေပွက်ထလာသည်။ ကာမစိတ်ရိုင်းတွေ အလှိုင်းတကြီး ဝင်ရောက်လာ၏။ ဆင်ခြင်တုံ အသိတရားတွေလည်း ပျောက်ကွယ်ကုန်ပြီ။ အဒေါ်သော ဘာသော နားမလည်တော့။
ဦးထွန်းမောင်လည်း ဟန်ဆောင် အိပ်ပျော်နေခြင်းမဟုတ်။ စောစောက သူ့မိန်းမကို လိုးဆော်လိုက်ရသဖြင့် တကယ်ပင် မောဟိုက်ကာ အိပ်ပျော်သွားခြင်းဖြစ်သည်။ သူ့အဒေါ်စောက်ဖုတ်ကိုမှ ဒီည မလိုးရဘူးဆိုလျှင် ရွှေဝင်းတစ်ယောက် သေလျှင်သေ မသေလျှင် သည်းခြေပျက်ကာ ရူးသွားဖို့ သေချာ၏။
ရွှေဝင်းက သူ့လီးတန်ကြီးကို ခပ်တင်းတင်းဆုတ်ကိုင်ထားရာမှ လေးငါးချက်ခန့် ခပ်ပြင်းပြင်း ဂွင်းတိုက်ထည့်လိုက်သည်။ ရာဂစိတ်တွေက ပြင်းထန်နေသဖြင့် သတိလက်လွတ်ဖြစ်ကာ လှုပ်ရှားသံ ထွက်ပေါ်သွားသည်။
အပေါ်ထပ်က လှုပ်ရှားသံကိုကြားလိုက်ရသော်လည်း မသိချင်ယောင်ဆောင်ကာ မတင်သောင်းက သူ့စောက်ဖုတ်ကြီးကို ဆက်ဆွနေသည်။ နို့အုံကြီးကိုလည်း အခြေက ဆုတ်ကိုင်ကာ ပွတ်ချေပေးနေ၏။ တစ်ကိုယ်လုံးလည်း တွန့်လိမ်ကော့ပျံနေပါတော့သည်။ ဦးထွန်းမောင်ကမူ တုတ်တုတ်မျှမလှုပ် တစ်ခေါခေါဟောက်လျက် အိပ်ကောင်းနေပါတော့သည်။
ယခုသူ့တူ ရွှေဝင်းရှိနေသော အပေါ်ထပ် အနောက်ခန်းမှာ ယခင်က မတင်သောင်း နေထိုင်ခဲ့သော အခန်းဖြစ်၏။ ယခု သူတို့လင်မယား နေထိုင်ကြသော အောက်ထပ်အခန်းမှာ ယခင်က သူ့အမေနှင့် အဖေတို့ နေထိုင်ကြသော အခန်းဖြစ်သည်။ အပျိုဖော်ဝင်ကာစ မိန်းကလေးများ ထုံးစံအတိုင်းဆန့်ကျင်ဘက် ယောကျာ်းအပေါ် စိတ်ဝင်စားလာတတ်သော မတင်သောင်းသည် သူ့အဖေနှင့် အမေတို့၏ ညရေးညတာ ကိစ္စများကို သိချင်စိတ် ပြင်းပြလာ၏။
တစ်နေ့ ကျောင်းနေဘက်သူငယ်ချင်း မြင့်မြင့်ကြည်နှင့် ရေခမ်လမ်းမှာ ဆုံကြသည်။ သက်တူရွယ်တူ ကာမပိုးကြွစ…. အရွယ်များ ဖြစ်ကြ၏။ မြင့်မြင့်ကြည့်မှာ ပထွေးနှင့် နေရသူ ဖြစ်၏။ ပြီးတော့ သူက တစ်ဦးတည်းသော သမီးဖြစ်၏။ မြင့်မြင့်ကြည်ကို သူ့ပထွေး ကိုစံတင်က အပေါ်ထပ်အနောက်ခန်းထဲမှာ နေစေသည်။ သူတို့ လင်မယားကတော့ မြင့်မြင့်ကြည် အခန်းနှင့်တည့်တည့် အောက်ထပ် အခန်းထဲမှာ နေကြသည်။
တစ်နေ့ မြင့်မြင့်ကြည် မရှိခိုက် ကိုစံတင် အပေါ်ထပ်တက်ပြီး မြင့်မြင့်ကြည် အခန်းထဲရှိကြမ်းပြင်ကို စူးနှင့်ဖောက်သည်။ ပြီးတော့ ဓားချွန်နှင့် ချဲ့သည်။ လက်မဝက်လောက်ရှိသောအခါ ရပ်လိုက်သည်။
ကိုစံတင်က ဤရွာသားမဟုတ်…။ (၁၂) ပွဲ ဈေးသည်လုပ်ခဲ့ဖူးသဖြင့် အတွေ့အကြုံက စုံလှပြီဖြစ်၏။ မိန်းမတွေ မှိုလိုပေါက်အောင် ယူခဲ့သည်။ ယခု မြင့်မြင့်ကြည် အမေ မလှခင်နှင့်ကျမှ အိမ်ထောင်သက် အတော်ကြာသည်ဟု ပြောနိုင်သည်။ ဒါကလည်း အကြောင်းရှိ၏။ မလှခင်က လုံးကြီးပေါက်လှ တောင့်တောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်…. စွဲမက်စရာ ရုပ်ရေရှိ၏။ ထို့အပြင် မြေယာဧကပေါင်းများစွာရှိသည်။ ဘယ်တုန်းကမှ အိမ်ခြေယာခြေ အတည်မရှိခဲ့ဖူးသော ကိုစံတင်တစ်ယောက် ရုပ်ချော ဥစ္စာပေါ မုဆိုးမနှင့်ညားမှ ဏ္ဍန္ဒြေရသွားတော့သည်။ ဒါကလည်း တစ်ချက်….။
မလှခင်မှာ ယခင်ယောကျ်ားနှင့် ရထားသော သမီးတစ်ယောက်ရှိ၏။ မအေတူ သမီးမို့ ချောချောလှလှဖြူဖြူတုတ်တုတ်ကလေး ဖြစ်သည်။ မအေကိုယ်နှိုက်ကလည်း သွေးသားဆူဖြိုးဆဲ ချောတုန်းတောင့်တုန်း…. လိုးလို့ မဝတုန်း ရှိသေး၏။ ရိုးအီသွားခဲ့လျှင် နောက်ဆက်လိုးရန် သမီးတစ်ယောက်က အဆင်သင့်ရှိနေ၏။ ကိုစံတင်က အကြမ်းပတမ်းကိုင်ဖို့ စိတ်ကူးမရှိ။ မိန်းမအတွေ့အကြုံ ရှိထားသူပီပီ…. သူ့အလိုလို ခံချင်စိတ်တွေ တားမနိုင် ဆီးမရဖြစ်လာစေရန် အကွက်ချ စီမံထား၏။ ထို့အပြင် မယားပါသမီး မြင့်မြင့်ကြည်မှာ ငယ်သေးသည်။ ကိုစံတင်က အရောတဝင် ပွတ်သီးပွတ်သပ်မနေ ခပ်တည်တည် ခပ်မှန်မှန်နေ၏။ ထို့ကြောင့် သားအမိနှစ်ယောက်လုံးက လေးစားရိုသေကြသည်။
မိန်းမစွဲအောင်လိုးနိုင်သော ကိုစံတင်ကို မလှခင်ကလည်း အသဲစွဲ ချစ်နေပါတော့သည်။ အရက်ပုံမှန် သောက်လေ့ရှိသော်လည်း အရက်ကြောင့် ဘာပြဿနာမှ မတက်အောင်နေတတ်၏။ အရက်မူး၍ ဆူပူရန်ဖြစ်ခြင်း လုံးဝမရှိ။ ထို့ကြောင့် မလှခင်က ကိုစံတင် အရက်သောက်တာကို လုံးဝငြူစူခြင်းမရှိ။ ကျန်းမာရေး လိုအပ်ချက်နှင့် သူ့ကို ကောင်းကောင်းလိုးပေးနိုင်ရန် သောက်သည်ဟု ထင်မှတ်နေသည်။
ကိုစံတင်နှင့် ညားပြီးနောက်ပိုင်းတွင် အမျှအတမ်းလည်း မဝေတော့…။ အမှတ်တရ ကုသိုလ်ကောင်းမှုလည်း မပြုလုပ်တော့……..။ ဒုတိယလင် ကိုစံတင်နှင့်သာ မရိုးနိုင်သောကာ မအရသာကို စိတ်တူကိုယ်တူ စိတ်ကူးရတိုင်း ရမ္မက်မြူးကြွတိုင်း ခံစားလျှက်ရှိနေပါတော့သည်။ မြေဧကပေါင်းများစွာနှင့်ခိုင်းနွား…. မွေးနွားတွေက နည်းနည်းနောနော မဟုတ်။ ကိုစံတင် အရင်းစိုက်ရတာဆိုလို့ သူ့ပေါင်ကြားက လီးတစ်ချောင်းသာ ဖြစ်သည်။
မြင့်မြင့်ကြည် အခန်းထဲက ကြမ်းပြင်ကို အပေါက်ဖောက်ပြီးသည့်ညက ဖွင့်ပွဲအဖြစ် လင်မယားနှစ်ယောက် ကြမ်းချင်တိုင်း ကြမ်းခဲ့ကြသည်။ မလှခင်မှာ အနေရိုးသော်လည်း တဏှာရာဂအားကြီးသော မိန်းမဖြစ်သည်။ ကုတ်ကမျင်း အမျိုးအစား ဖြစ်သည်။ လီးနှင့် အပြတ်ခံနိုင်သူ မဟုတ်…..။ ကိုစံတင်မှာ ကာမကိစ္စအထောက်အကူပြု စားဆေးလိမ်းဆေးတွေရှိ၏။ ရိုးအလှသော မလှခင်ကမူ ဘာမှမသိရှာ။ သူ့ဆန္ဒပြည့်ဝအောင် အားရပါးရ လိုးပေးတာကိုဘဲ အကျေနပ်ကြီး ကျေနပ်နေရှာ၏။
ထိုညက မလှခင်ကို အရက်တစ်ခွက် တိုက်၏။ အရက်ထဲတွင် စိတ်ကြွဆေးမှုံ့တွေ ခပ်ထားသည်။ ည (၁၀) နာရီခွဲလောက်တွင် အလုပ်စခန်းစကြ၏။ မြင့်မြင့်ကြည် သိုးနေသော အချိန်မို့ ထင်တိုင်းကျဲနေကြသည်။ ခါတိုင်းဆိုလည်း ယခုလို ထင်တိုင်းကျဲခဲ့ကြသော နေ့ရက်တွေ မနည်းလှပါ။ သို့သော်….. ဒီနေ့လို ဆူဆူပူပူ ဝုန်းဝုန်းဒိုင်းဒိုင်းတော့ မဟုတ်…….။ ကိုစံတင်က အကြံရှိသူပီပီ အပေါ်ထပ်မှာ အိပ်နေသော မြင့်မြင့်ကြည် မနိုးနိုးအောင် တမင်ဖန်တီးခြင်း ဖြစ်၏။
အရက်အရှိန်နှင့် ရမ္မက်ကြွဆေးအရှိန်က တရိပ်ရိပ် တက်လာပြီဖြစ်ရာ… မလှခင် တစ်ယောက် အပေါ်ထပ်မှာ ရှိနေသော သမီးကိုတောင် သတိမရတော့။ ဖြစ်ပုံက ဒီလိုပါ….။ ကိုစံတင် အလိုးကျွမ်းရုံသာမက ဘာဂျာမှုတ်လည်း ကျွမ်းသည်။ ဘာဂျာမှုတ်ဆိုသည်မှာ စောက်ဖုတ်ကို ယက်ခြင်း။ စုပ်ခြင်း… မှုတ်ခြင်းကို ဆိုလိုသည်။
ကိုစံတင်ရော မလှခင်ပါ လိုးတော့မည်ဆိုလျှင် အလွန်အေးသော ဆောင်းရာသီမှအပ ကိုယ်တုံးလုံးချွတ်၍ အားရပါးရ လိုးလေ့ရှိသည်။ ကိုစံတင်က မလှခင်ကို ကုတင်စောင်းမှာ ခြေတွဲလောင်းချထိုင်စေပြီး ပေါင်တံ ဖွေးဖွေးတုတ်တုတ်ကြီး နှစ်ချောင်းကို ခပ်ကားကား ဖြဲကားထားစေသည်။ ထို့နောက် ကိုစံတင်က ကြမ်းပြင်ပေါ် ဒူးထောက်လိုက်ပြီး စောက်ဖုတ်ကြီးကို လက်နှင့်ဖြဲကာ အရည်လဲ့နေသော အတွင်းသားနုနုလေးတွေကို ပါးစပ်ဖြင့် ရှုးကနဲ စုပ်ထည့်လိုက်သည်။ အီးကနဲ အသံကြီးနှင့်အတူ မလှခင်လက်နှစ်ဖက်မှာ နောက်သို့အလိုလို ထောက်မိလျှက်သား ဖြစ်သွားပြီး ဖင်ဆုံကြီးကို မြောက်ကြွလျှက် စောက်ဖုတ်ကြီးကို ကော့ပေးမိလျှက်သားဖြစ်သွား၏။
ကိုစံတင်က စောက်ဖုတ်အတွင်းသား နုနုတွေကို ပါးစပ်ဖြင့် စုပ်ရင်း လျှာနှင့်ပါ မွှေနှောက် ထိုးကလိပေးသည်။ ကိုစံတင် စောက်ခေါင်းအတွင်း လျှာဖြင့်လှည့်ပတ်မွှေနှောက်ရင်း မလှခင်၏ ဆူဖြိုးထွားကားသော တင်ဆုံသား တင်းတင်းအိအိကြီးကို အားပါးတရ ဆုတ်ချေပွတ်ဆွ ပေးပြန်၏။
“…… ကဲ…… မိန်းမ…. ဖင်ကုန်းပေးစမ်းကွာ….”
မလှခင်တစ်ယောက် ဖီလင်တွေ အရမ်းတက်နေသော်လည်း ကိုစံတင်အလိုကျ ကုတင်ဘောင်တန်းပေါ် လက်ထောက်ပြီး ခါးကိုညွတ်လျှက် ဖင်အိုးကြီးကို စွင့်မြှောက်ပေးထား၏။
“ဖျန်း ဖျန်း ဖျန်း ဖတ်…. ဖတ် ဖျန်း”
ကိုစံတင်က ဖင်ဆုံထွားထွားပြည့်ပြည့်ကြီးကို တဖျန်းဖျန်း တစ်ဖတ်ဖတ် ရိုက်ပွတ်လျက် သူ့လီးတံကြီးကို စောက်ဖုတ်အဝနှင့်တေ့ကာ တရှိန်ထိုး ဆောင့်သွင်းထည့်လိုက်သည်။
“……အင့် အမေ့ အင့်”
မလှခင်တစ်ယောက် အင့်ကနဲ အသံထွက်ကာ ခါးညွတ်လျှက် ဖင်ဆုံကြီး မြောက်တက်သွားသည်။ ကိုစံတင်က လက်နှစ်ဖက်နှင့် မလှခင်ခါးကို ဆုပ်ကိုင်ကာ ခပ်ကြမ်းကြမ်း ဆောင့်ဆောင့် လိုးပါတော့သည်။ လိမ်းဆေးအာနိသင်ကြောင့် လီးတန်ကြီးမှာ ထွားကြိုင်းတုတ်ရှည် မာကြောနေ၏။
တဏှာ ရာဂကြီးသော မလှခင်သည် ဤကဲ့သို့ ခပ်ကြမ်းကြမ်းလိုးပေးသည်ကို အလွန်သဘောကျ ကျေနပ်လျှက်ရှိသည်။ ခပ်ပြင်းပြင်း ဆောင့်ချက်တွေနှင့် ခပ်ကြမ်းကြမ်းကော့ကော့ ခံနေပုံမှာ သဲထိတ်ရင်ဖို ကောင်းလွန်းလှသည်။
အချက် (၅၀) ကျော်လောက် ဆောင့်လိုးပြီးသောအခါ ကိုစံတင်က သူ့လီးတန်ကြီးကို ဖြုန်းကနဲ ဆွဲနှုတ်လိုက်သည်။ ရမ္မက်ဇောတွေ ပြင်းထန်လျှက် တအားခံကောင်းနေစဉ် ဗြုန်းကနဲ လီးတန်ကြီး ကျွတ်သွားသဖြင့် ရင်ထဲဟာသွားသည်။ ဘာများလုပ်ဦးမှာပါလိမ့်ဟု မျှော်လင့်စောင့်စားနေစဉ် ကိုစံတင်က ဘာမှ မလှုပ်ရှားသည့်အတွက် မလှခင်ခေါင်းငဲ့ပြီး နောက်ပြန်ကြည့်လိုက်သည်။
ကိုစံတင်က အဝင်ဝတံခါးရှေ့တွင် မတ်တပ်ကြီး စုံရပ်လျှက် သူမကို ပြုံးဖြီးဖြီးကြီး ကြည့်နေသည်။ ဟွန်းမသာကောင် ဒီကကောင်းနေမှန်းသိလို့ သက်သက်မဲ့ယုတ်တာဟု စိတ်ထဲက ကျိတ်ဆဲရင်း ကိုစံတင်ရှိရာသို့ ဒုန်းပြေးသွားသည်။ ကိုစံတင်ကလည်း ကွေ့ရှောင်ပြေး၏။ အခန်းထဲ လိုက်တမ်း ပြေးတမ်းကစားသလိုဖြစ်ကာ တစ်ဒုန်းဒုန်း ဆူညံနေသည်။ မိမလိုရှိရာမှ ကိုစံတင်က ငုံ့ရှောင်လိုက်ပြီး ဖင်ဆုံထွားထွားကြီးကို ဖျန်းကနဲ ပုတ်လိုက်၊ နို့ကြီးကို ဆွဲချေလိုက်နှင့် မထိတထိစသည်။
ဤကဲ့သို့ အောက်ထပ်မှာ တဒုန်းဒုန်းဖြစ်နေစဉ် အပေါ်ထပ်ရှိ မြင့်မြင့်ကြည် လန့်နိုးသွားသည်။ သူ့အမေနှင့်ပထွေး သတ်များသတ်နေကြသလားဟု စိတ်ထဲ ပူသွားသည်။ ကျွတ်နေသော ထမီကို ဖြစ်သလို ပြင်ဝတ်ရင်း အောက်ထပ်သွားမည်အပြု အောက်ထပ်မီးရောင်က သူ့အိပ်ယာ သင်ဖြူးစွန်းကြမ်းပေါက်တွင် လာဟပ်နေ၏။ ထို့ကြောင့် ဒူးတုတ်၍ ချောင်းကြည့်လိုက်သည်။ ဘာမှမသိသော မလှခင်က သတိမထားမိသော်လည်း အကြံသမား ကိုစံတင်မှာ အပေါ်ထပ်၏ အခြေအနေကို အကဲခတ်နေသည်။ အောက်ထပ်က ဆူညံသံတွေကြောင့် မြင့်မြင့်ကြည် နိုးသွားပြီကို သိလိုက်သည်။
“အား အား….နာတယ်ဟ မိန်းမရ”
“ဒီမယ် ခံလို့ကောင်းနေတာကို ဘာလို့လီးကို ချွတ်ပြစ်ရတာလဲ”
မလှခင်က ပြောလည်းပြော လီးကြီးကိုလည်း တအားဆောင့်ဆွဲလိုက်ရာ ကိုစံတင်တစ်ယောက် မလှခင်နှင့် ပူးကပ်သွားသည်။ မလှခင်က လီးတန်ကြီးကို မလွှတ်ဘဲ ဆွဲဖြဲပြီး ကုတင်ဆီ ခေါ်သွားသည်။ မလှခင်က ခုတင်ပေါ် ကန့်လန့်ဖြတ် အိပ်လိုက်ပြီး ဒူးထောင် ပေါင်ကား ပေးသည်။ ကိုစံတင်ကလည်း မြင့်မြင့်ကြည် ချောင်းကြည့်နေမှန်းသိ၍ တဖြည်းဖြည်း သွင်းပြခြင်း ဖြစ်သည်။
ကိုစံတင် လီးတံတုတ်တုတ်ကြီးက သူ့အမေစောက်ဖုတ်ထဲ တရစ်ခြင်း ဝင်နေတာကိုကြည့်ရင်း မြင့်မြင့်ကြည် ကြက်သီးတစ်ဖျန်းဖျန်း ထသွား၏။ စိတ်ထဲမှာ လည်း ဘာလိုလို ဖြစ်နေသည်။ ပေါင်ကြားရှိ စောက်ဖုတ်လေးမှာလည်း မာတင်းသွားသည်ဟု စိတ်ထဲက ထင်လိုက်မိသည်။
“အေး အဲဒါပဲအေ ငါ့အမေနဲ့…. ငါ့ပထွေး အဲဒီညက လိုးချက်ကတော့ ပက်ပက်စက်စက်ပါဘဲအေ”
“ဒါဖြင့် ညဉ်းညတိုင်း ကြည့်တာပေါ့ ဟုတ်လား”
“အင်းပေါ့ဟဲ့ ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ဥစ္စာ အဟင်း”
ယခု သူမကိုယ်တိုင် သူ့အမေနှင့် သူ့အဖေတို့ ညညလိုးကြပုံကို ချောင်းကြည့်ခဲ့ဖူးသော အပေါက်မှာ သူ့တူရွှေဝင်းက ချောင်းကြည့်နေပေလိမ့်မည်။ တူဆိုသော်လည်း အရင်းမဟုတ်… ဝမ်းကွဲသာ ဖြစ်သည်။ အရင်းဖြစ်လျှင်လည်း မတင်သောင်းက ဂရုမစိုက်ပါ။ဤကမ္ဘာမြေလောကတွင် မိန်းမယောကျာ်း ဒွန်တွဲ၍ ပေါ်လာကတည်းက လိုးဖို့ခံဖို့ ကာမဂုဏ် ခံစားဖို့မဟုတ်ပါလား။ မိန်းမပေါင်ကြားတွင် စောက်ဖုတ်ခေါ် အပေါက်ရှိသလို၊ ယောကျာ်း ပေါင်ကြားတွင်လည်း လီးခေါ်သော အချောင်းရှိသည်။
အဒေါ်ဖြစ်သူ ကာမဆန္ဒ မပြည့်ဝ၍ တစ်ကိုယ်တည်း နှိုက်ဆွ ဖြေသိမ့်နေပုံကြီးကိုကြည့်၍ ရွှေဝင်းလီးကြီးမှာ သံမဏိချောင်းကြီးကဲ့သို့ မာကျော၍ တောင်နေသည်။ စောစောက လေးငါးဆယ်ချက်ခန့် ခပ်ပြင်းပြင်း ဂွင်းတိုက်ထားသဖြင့် လချောင်းကြီး တစ်ခုလုံး ပူရှိန်းယားကြွနေသည်။ ရွှေဝင်းတစ်ယောက် ဆုတောင်းကောင်းခဲ့ပုံရ၏။ သူ့ပေါင်ကြားက လီးကြီးမှာ အရွယ်နှင့် မလိုက်အောင် ရှည်လျှား တုတ်ခိုင်လှသည်။ ပြီးတော့ ဂွင်းတိုက်လျှင် တော်တော်နှင့် လရည်ထွက်လေ့မရှိ။ သုတ်ကို ကြာရှည်စွာ ထိန်းထားနိုင်သော ဆေးဝါးမလိုဘဲနှင့်ကို အံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင် ထိန်းထားနိုင်သည်။
ပေါင်တံဖွေးဖွေး ခြေသလုံးသား ဝင်းဝင်းဖွေးဖွေးကြီးတွေ လူးလွန့်လှုပ်ရှားနေပုံမှာ အသဲယားစရာကောင်းလွန်းလှသည်။ နို့သီးခေါင်းကြီးကလည်း ကာမသွေးတွေ ပြည့်လျှမ်းကာ စူတင်းဝင်းပြောင်နေ၏။ မတင်သောင်းတစ်ယောက် ရမ္မက်ဇောတွေအပြင်းအထန်ကြွ၍ ဤမျှ ဆက်စလူးထနေသည့်တိုင် ဦးထွန်းမောင်တစ်ယောက် တုတ်တုတ်မျှ မလှုပ်ပါ။ တမင်သက်သက် လုပ်နေသလား (သို့မဟုတ်) အသက်မှ ရှိသေးသလားဟု ထင်မှတ်ရသည်။
ရွှေဝင်း ဘယ်လိုမှ မနေနိုင်တော့ပါ။ ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်ဟု ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီး ပုဆိုးအင်္ကျီတွေကို အားလုံးချွတ်ပစ်လိုက်သည်။ ရွှေဝင်းတစ်ကိုယ်လုံး ကာမ အမှောင်ဓာတ်က ဖုံးလွှမ်းသွားပြီ ဖြစ်သည်။ သူ့ညာလက်ဖဝါးထဲ တံတွေးထွေးထည့်လိုက်ပြီး လီးတံကြီးကို ဆုပ်ကိုင်ကာ အချက်(၂၀)ခန့် ခပ်ပြင်းပြင်း ဂွင်းတိုက်သည်။ လီးတန်ကြီးမှာ အကြောအပြိုင်းပြိုင်းထလျက် ပို၍တင်းပြောင်လာသည်။ ဒစ်ဆံကြီးမှာလည်း ပေါက်ကွဲထွက်မတတ် တင်းကားလာသည်။ ပြီးတော့ အောက်ထပ်သို့ ဒရောသောပါး ဆင်းချလာသည်။
ပြင်းထန်သော ခြေသံများကြောင့် ရွှေဝင်း အောက်ထပ်ဆင်းလာသည်ကို ရိပ်မိ၍ မတင်သောင်း စိတ်ထဲ ပြုံးလိုက်မိသည်။ ရွှေဝင်း အရွယ်နှင့်မလိုက်အောင် လီးကြီးမှန်း မတင်သောင်း သိထားပြီး ဖြစ်သည်။
တစ်ရက် ဦးထွန်းမောင်က ရွှေဝင်းကို ဗေဒင်သင်ကြားပေနေစဉ် အနောက်ဖက်ရွာက လူနှစ်ယောက် ဦးထွန်းမောင်ကို လာပင့်ကြသည်။ အကျိုးအကြောင်း မေးကြည့်သောအခါ ကျေးရွာဥက္ကဌ၏သမီး အောက်လမ်းဆရာ အလုပ်ခံရ၍ ကုသပေးရန် လာပင့်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ဦးထွန်းမောင်က ဗေဒင် သင်ကြားခြင်းကိုရပ်ကာ လှည်းနှင့်လာပင့်သော အနောက်ဖက် ရွာသားများနှင့် ပါသွားသည်။ ရွှေဝင်းကိုလည်း ယခုပြထားသော နည်းအတိုင်း သံဒိဋ္ဌပြက္ခဒိန်ကြည့်၍ ဇာတာခွင် ၁၉ မျိုး ချထားရန် မှာခဲ့သည်။
ဦးထွန်းမောင် ထွက်သွားပြီး မကြာမှီ ရွှေဝင်းလည်း စာအုပ်များကိုယူဆောင်ကာ အပေါ်ထပ် အနောက်ခန်းထဲဝင်၍ ဇာတာခွင်ချနေ၏။ ဇာတာခွင် ၁၅ မျိုး ချပြီးသောအခါ တအားအိပ်ချင်လာ၍ အခန်းထဲရှိ ကုတင်ပေါ်တွင် တက်အိပ်လိုက်သည်။
နေ့လည် ထမင်းစားချိန်အထိ ဆင်းမလာ၍ မတင်သောင်း ရွှေဝင်းရှိရာ အပေါ်ထပ်တက်လာသည်။ အခန်းတံခါး ဖွင့်လိုက်သောအခါ ကုတင်ပေါ်တွင် ပက်လက်ကားယားကြီး အိပ်ပျော်နေသော ရွှေဝင်းကို တွေ့ရ၏။ ပုဆိုးတွင်းမှ တောင်မတ်နေသော လီးတန်ကြီးကို မြင်လိုက်သောအခါ မတင်သောင်း ပေါင်ကြားရှိ စောက်ဖုတ်ကြီးမှာ ဒုတ်နှင့်အတို့ခံလိုက်ရသော ဂုံညင်းဖားကြီးလို ရမ္မက်မာန်ဖီ၍ ခုံးထလာသည်။ လီးတန်ကြီးကို မမြင်ရသော်လည်း သူ့ယောကျာ်းထက် ၂ ဆ ခန့်ရှည်ကြောင်း ခန့်မှန်းလို့ရသည်။ မတင်သောင်း အခန်းတံခါးပြန်စိ၍ အသာလေး ပြန်ဆင်းလာခဲ့သည်။ ထိုနေ့မှစ၍ ရွှေဝင်းအပေါ် မရိုးသားစိတ်တွေ ဝင်လာခဲ့သည်။
ကာမရာဂကိလေသာစိတ်က တူဟူသော အသိကို ရိုက်ချိုးဖျက်ဆီး လိုက်ပါတော့သည်။ ယခု သူကြိတ်၍ ကြံစည်ခဲ့သမျှ အထမြောက်တော့မည်မို့ မတင်သောင်းတစ်ယောက် ရင်တွေတလှပ်လှပ်ခုန်ကာ အဖုတ်အုံကြီးက တဖျပ်ဖျပ် မြူးကြွနေသည်။
ဦးထွန်းမောင် ညည သောက်လေ့ရှိသော နွားနို့ခွက်ထဲသို့ အိပ်ဆေးနှစ်လုံး ခတ်ထားလိုက်သည်။ ဦးထွန်းမောင် ညည မလိုးခင် နွားနို့တစ်ခွက် သောက်နေကျဖြစ်၏။ ရွှေဝင်း ဒီမှာ ညအိပ်ဖြစ်အောင်လည်း မတင်သောင်းပင် အကွက်ဆင်ခဲ့သည်။ နေရာတကာ လာဘ်မြင် အကင်းပါးတတ်လွန်းသော ဦးထွန်းမောင်တစ်ယောက် ဒီည ပယ်ပယ်နယ်နယ် ကြီး ခံလိုက်ရတော့သည်။
ရွှေဝင်းတစ်ယောက် သူ့အဒေါ်အခန်းထဲ မဝင်ခင် အိမ်အပြင်ထွက်၍ သေးပေါက်လိုက်သေးသည်။ ပြီးမှ တံခါးကို အသေအချာ ဂျက်ထိုးပိတ်ပြီး သူ့အဒေါ်အခန်းဆီလာသည်။ခစေ့ထားသော တံခါးကို ဆွဲဖွင့်လိုက်ရာ မျက်လုံးစုံမှိတ်ကာ စောက်ဖုတ်ထဲ လက်ထည့်၍ အသွင်းအနှုတ်လုပ်နေသော မတင်သောင်းတစ်ယောက် ဖျပ်ကနဲ အဝင်တံခါးဆီ ကြည့်မိသည်။
ရွှေဝင်းပေါင်ကြားက လီးတန်ကြီးကို မြင်လိုက်ရသောအခါ ကြက်သီး တဖျင်းဖျင်းထသွား၏။ ပေါင်တံ၊ ရင်အုပ်၊ လက်မောင်း၊ ခြေသလုံး ကြွက်သားတွေက အရွယ်နှင့်မမျှ ကျစ်လျစ်လစ်လစ် ဖုထစ်နေသည်။ ပေါင်ကြားက လီးတန်ကြီးက ပုတ်သင်ညို ခေါင်းညိတ်သလို တဆတ်ဆတ်နှင့် တောင်ပြပြီး မတင်သောင်းကို ဖိတ်ခေါ်နေသကဲ့သို့ဖြစ်၏။
ရွှေဝင်းက ကုတင်ဆီသို့ တဖြည်းဖြည်းချင်း လာနေသည်။ လီးကြီးကလည်း တဆတ်ဆတ်နှင့် တောင်နေသည်။ မတင်သောင်း ပက်လက်အိပ်နေရာမှ ထထိုင်လိုက်ပြီး ကုတင်စောင်းတွင် ခြေတွဲလောင်းချကာ ပေါင်ကို အနည်းငယ်ဖြဲလျှက် ရွှေဝင်းကို ကြိုဆိုနေ၏။
အနားသို့ရောက်လာသောအခါ ရွှေဝင်းခါးကို လှမ်းဖက်လိုက်သည်။ ရွှေဝင်း လီးတံနွေးနွေးကြီးက ဆီးခုံမို့မို့ကြီးကို ဖိထောက်ထား၏။ ရွှေဝင်းက မတင်သောင်းပါးကို ဆွဲမော့ပြီး နှုတ်ခမ်းကို စုပ်သည်။ မတင်သောင်းက သူ့လျှာကို ရွှေဝင်းပါးစပ်ထဲသို့ ထိုးထည့်ပေးသည်။ ရွှေဝင်းက မြှင်း၍ စုပ်ပေးသည်။ မတင်သောင်းက တွဲလောင်း ချထားသော ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို ကုတင်စောင်းပေါ် မတင်လိုက်ပြီး ကိုယ်ကို အနည်းငယ်ပြင်၍ မတ်တောင်နေသော လီးတန်ကြီးကို သူမလက်နှင့်ကိုင်ကာ အဖုတ်ဝကို တေ့ပေးသည်။
ရွှေဝင်းက ဒူးကောက်ကွေးကြားတွင် သူ့လက်နှစ်ဖက်သွင်းပြီး ခါးကို လှမ်းဖက်ကာ သူ့ဖင်ကြီးကို ရှေ့သို့ တိုးပေးသည်။ တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကြီး တိုးဝင်လာသော လီးတန်ကြီး၏ အရသာကို တနင့်တပိုးကြီးခံစားရင်း လက်နှစ်ဖက်က ရွှေဝင်းလည်ပင်းကို သိုင်းဖက်ထားလိုက်၏။
လီးတန်ကြီးမှာ စောက်ဖုတ်ကြီးထဲ တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကြီး တိုးဝင်နေရာ တဝက်လောက် အရောက်တွင် ရွှေဝင်းက ကိုယ်ကိုမတ်၍ မတင်သောင်းကို ကုတင်ပေါ်မှ ဆွဲယူလိုက်သည်။ အမှတ်တမဲ့မို့ မတင်သောင်း ထိတ်ကနဲ လန့်ဖြန့်သွားပြီး လည်ပင်းကို တင်းနေအောင် ဖက်ထားလိုက်ရသည်။ ပြည့်ဖြိုးထွန်းကားသော ဖင်ဆုံကြီးက အောက်သို့အနည်းငယ်ကျဆင်းသွားရာ လီးတန်ကြီးကို အားနှင့် ဆောင့်သွင်းလိုက်သလို ဖြစ်ပြီး ‘ ဖလွတ်’ ကနဲ အဆုံးထိ နစ်ဝင်သွားပါတော့သည်။ ကောင်းလိုက်သည်မှာ ခေါင်ခိုက်နေပါတော့သည်။
အသက် ၃၈ နှစ်ရှိသည့်တိုင် ကလေးမမွေးဖူးသေးသော စောက်ဖုတ်မို့ အော်ရီဂျင်နယ် စောက်ဖုတ်နှင့်အခြား စီးစီးပိုင်ပိုင် ရှိလွန်းလှသည်။ လီးတန်ကြီးနှင့်ယှဉ်လိုက်လျှင် စောက်ဖုတ်အဝမှာ ကျဉ်းနေသည်ဖြစ်ရာ ကိုယ်ကိုလှုပ်လိုက်သည့်အခါတိုင်း ဖျင်းကနဲ ဖျင်းကနဲ ပူရှိန်းအီဆောင့်သွားရသည်။
ရွှေဝင်းက မတင်သောင်းကို ပွေ့ချီရင်း လိုးခဲ့ရာ အိမ်အောက်ထပ် အရှေ့ခန်းရှိ နောက်မှီခုံရှည်များဆီသို့ ရောက်လာသည်။ ခုံရှည်နှစ်လုံးအလည်ရှိ စားပွဲခုံပေါ်သို့ မတင်သောင်းကို ပက်လက်ချပေးလိုက်သည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာဖြင့် စားပွဲခုံက အံကျဖစ်ဆိုက် ဖြစ်နေပါတော့သည်။ အပေါ်ယံကြည့်လျှင် အေးဆေးတည်ငြိမ်သလောက် အတွင်းအဇ္ဈတ္တက ကာမရမ္မက်အလွန်ကြီးသော မတင်သောင်းမှာ ရွှေဝင်းလီးကြီးနှင့် တွေ့တော့မှ အားရကျေနပ်သွားပါတော့သည်။
စောက်ဖုတ်အုံတစ်ခုလုံး တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကြီးဖြစ်ကာ ပူရှိန်းယားကြွနေသည်။ ထိုစဉ် ရွှေဝင်းက သူ့လီးတန်ကြီးကို တစ်ဝက်ကျော်ကျော် ပြန်နှုတ်၏။ စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားကြီးက လီးတန်ကြီးနှင့်အတူ ကြွတက်ပါလာ၏။ ရွှေဝင်းက ထိုသို့တဝက်ကျော်ကျော် နှုတ်ထားရင်းကပင် ဘာမှ မလုပ်သေးဘဲ မတင်သောင်း၏ နို့ကြီးနှစ်လုံးကို ဆုတ်ချေပွတ်ဆွပေး၏။ နို့သီးခေါင်းတွေကိုလည်း လှိမ့်ချေပေးသည်။ မတင်သောင်း စောက်ခေါင်းထဲမှာလည်း စောက်ရည်တွေ တစိမ့်စိမ့်ထွက်ကာ လှိုက်လှိုက်ပြီး ယားတတ်လာသည်။
ရွှေဝင်းက ကိုယ်ကိုကုန်း၍ နို့နှစ်လုံးကို စို့ပေးလိုက်၏။ မတင်သောင်း နှုတ်ဖျားက
ဟူသော ရမ္မက်ငြီးသံကြီး ထွက်ပေါ်လာပြီး…. စောက်ဖုတ်ကြီးကို အစွမ်းကုန် ကော့ပေးလိုက်ရာ…. တဖျစ်ဖျစ် အသံများ ထွက်ပေါ်လာပြီး တစ်ဝက်ကျော်ကျော် ထွက်နေသော လီးတံကြီးကို စောက်ဖုတ်ကြီးက အဆုံးထိ ဝါးမြိုသွားပြန်သည်။
“ဒေါ် ဒေါ်….ကောင်းလားဟင် ”
“ရှီး ကျွတ် ကျွတ် အားပါးပါး ကောင်းမှကောင်း လိုက်တာကွယ်။ အမလေး..… စောက်ဖုတ်ထဲကို ကျဉ်စိမ့်နေတာပဲကွယ်…. နာနာလေး ဆောင့်လိုးပေးတာ ကောင်းတယ်ကွယ် ထပ်လုပ်ပေးပါဦးနော် နော်”
ဖတ်ရှုကြိမ် စုစုပေါင်း : 29,557
ဘဝတကွေ့ ဆုံတွေ့ခဲ့ရ မဆုံတဲ့ဖူးစာ